GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Fante Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Kimbundu Kinyarwanda Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mingrelian Nahuatl (Central) Norwegian Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Rarotongan Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tarascan Tigrinya Totonac Tsonga Turkish Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Valencian Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Ịsụgharị otu abụ adịghị mfe. Jirizie ya mara otú ịsụgharị otu narị abụ na iri atọ na ise ga-adị.
Ọ bụ ihe a siri ike omume ka Ndịàmà Jehova gbara mbọ mee. N’ime afọ atọ, ha sụgharịrị akwụkwọ abụ ha a na-akpọ Bụkuo Jehova Abụ n’asụsụ otu narị na iri na isii. Ha asụgharịakwala akwụkwọ abụ ha nke nwere naanị abụ iri ise na ise n’asụsụ iri ise na ise ọzọ. A ka nwekwara ọtụtụ asụsụ ndị ọzọ a na-atụ anya iwepụta akwụkwọ abụ ndị a na ha.
Ihe Dị Iche n’Ịsụgharị Abụ na Ịsụgharị Akwụkwọ Ndị Ọzọ
Ndịàmà Jehova na-asụgharị akwụkwọ ha n’ihe dị ka narị asụsụ isii. Ihe dị ka narị anọ n’ime asụsụ ndị a dịkwa na jw.org. Ma, ịsụgharị akwụkwọ abụ siri ike karịa ịsụgharị akwụkwọ ndị ọzọ e ji amụ Baịbụl. Gịnị mere anyị ji kwuo otú ahụ? Ọ bụ maka na otú a ga-esi abụ abụ ahụ n’asụsụ niile ga-abụrịrị otu.
Ịsụgharị abụ adịghị ka ịsụgharị akwụkwọ nkịtị. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ndị nsụgharị a na-asụgharị Ụlọ Nche anyị n’asụsụ ọzọ, ha na-agbalị hụ na ha kwuru ihe niile dị mkpa e kwuru n’asụsụ ha si na ya asụgharị ya. Ma a bịa n’abụ, ọ naghị adịcha otú ahụ.
Otú E Si Asụgharị Ya
Otú ndị nsụgharị na-esi asụgharị abụ na-adịtụ iche n’otú ha na-esi asụgharị akwụkwọ ndị ọzọ. Ihe kpatara ya bụ na ihe ọ bụla a ga-ede n’abụ kwesịrị ịdị ụtọ ná ntị, nwee ezigbo ihe ọ pụtara ma dịkwa mfe ncheta.
Ihe ọzọ bụ na ahịrịokwu nke ọ bụla dị n’abụ kwesịrị ịdịrị onye na-abụ abụ mfe nghọta. N’asụsụ ọ bụla, ihe a na-abụ n’abụ na ụda abụ ahụ kwesịrị ịna-adabakọ. Abụ ahụ kwesịkwara ịna-aga onye na-abụ ya were were n’ọnụ ka à ga-asị na ọ bụ ya rọrọ ya.
Olee otú ndị na-asụgharị abụ si eme ihe ndị a? A gwara ndị na-asụgharị abụ ka ha depụta ihe okwu abụ ndị dị na nke Bekee pụtara n’asụsụ ha. Ha anaghị eme, ha lere otu mkpụrụ okwu Bekee anya, ha kwuo ụdị ya n’asụsụ ha. Kama, ha na-echebara ihe ahịrị nke ọ bụla na-ekwu echiche ma dee ya otú e si ekwu ya n’asụsụ ha. Abụ Bekee ndị ahụ si n’Akwụkwọ Nsọ. Ndị nsụgharị na-agbalịkwa hụ na ihe si n’Akwụkwọ Nsọ abụ nke Bekee na-ekwu bụkwa ihe nke ha sụgharịrị na-ekwu. Ma, ha na-ahụkwa na okwu ha ji sụgharịa abụ nke ọ bụla bụ okwu a ga-aghọta nke ọma na nke e nwere ike icheta ngwa ngwa.
Ihe mbụ a na-eme ma a sụgharịwa abụ bụ ibugodị ụzọ sụgharịa ya otú e si asụgharị akwụkwọ nkịtị. A sụgharịchaa ya, Onyeàmà Jehova maara ede abụ na-abịazi hazie okwu ndị ahụ a sụgharịrị, ka ha na-adaba n’ụda abụ ahụ, meekwa ka ọ dị ụtọ ọbụbụ, a ghọtakwa ihe a na-abụ. Ya mechaa, ndị sụgharịrị abụ ahụ na ndị na-agụgharịrị ha ya na-asazi anya ná mmiri leruo ihe ahụ onye ahụ na-ede abụ haziri anya iji hụ na ihe ndị o degharịrị emegideghị ihe Baịbụl kwuru.
Mgbe e wepụtara akwụkwọ abụ ọhụrụ a, obi tọrọ Ndịàmà Jehova nọ n’ụwa niile ezigbo ụtọ. Ọtụtụ n’ime ha na-atụsikwa anya ike mgbe a ga-asụgharịkwu ya n’asụsụ ndị ọzọ.
Anyị na-ebipụta akwụkwọ anyị n’ihe karịrị narị asụsụ isii. Gịnị mere anyị ji agba ụdị mbọ a?